အန္တရာယ်ကြီးလာသည့် မြန်မာဗီဒီယို ရုပ်ရှင် နှင့် ထပ်ဆင့်အတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အန္တရာယ်ကြီးလာသည့် မြန်မာဗီဒီယို ရုပ်ရှင် နှင့် ထပ်ဆင့်အတွေး
အန္တရာယ်ကြီးလာသည့် မြန်မာဗီဒီယို ရုပ်ရှင် နှင့် ထပ်ဆင့်အတွေး
Posted by Shwemannmay on May 11, 2010 in Other - Non Channelized |6comments
မြန်မာ ရုပ်ရှင်ကား တွေဟာ 18+ တွေချည်းပဲ ဖြစ်ကုန်ပြီ” ဟု မိတ်ဆွေ တယောက်က ပြောဖူးသည်။ အစကတော့ သိပ်နားမလည် လက်မခံနိုင်ခဲ့။ သို့သော် အခုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သွားပါပြီ။
အဲဒါ ဧရာဝတီ မှာဖေါ်ပြထားတာပါ ။ ဒါကိုဖတ်မိပြီး ထပ်ဆင့်စဉ်းစားမိတာလေးတွေ ချေ၇းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အနုပညာ ဆိုတာပာာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူနေမှုဘ၀ တွေကိုထင်ပာပ်ဖေါ်ပြတဲ့ မှန်တစ်ချပ်လို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး ။ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်ကို ထိမိတဲ့ ရသတစ်ခုခု ကိုမပေးစွမ်းနိုင်တော့တာ ကြာပါပြီ။ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ ၊ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေကို ဖေါ်ကျူးတာမှာ အ၀တ်အစားနဲ့အလှအပ ကို ဦးစားပေးလွန်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကိုထားပါတော့ အခု ဒီတော့ပစ်နဲ့ ဆိုင်တာကို ပြောပါမယ်။ စကားလုံး အသုံးအနှူန်း ၊ ကိုယ်ပာန်အမူအရာ နဲ့ ပြောပုံဆိုပုံတွေပာာ ယဉ်ကျေးမှူနည်းပါးလွန်းတာကိုတွေ့ ရပါတယ်
ခါးအောက်ပိုင်းကမတက်တဲ့အဓိပါယ်နှစ်ခွ ကောက်ယူနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကို ဦးစားပေးပြီး ဒီလိုပျက်လုံးတွေနဲ့ ပဲပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဘာပညာပေးမှလည်းမပါတာကိုတွေ့ ရပါတယ် ။ အခုတော့ ပိုဆိုးလာတဲ့သဘောပေ့ါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်အပြီးမှာ ရန်ကုန်ကိုကိစ္စရှိလို့ အသွား အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ သင်္ကြန်ကားတစ်ကားကို ကြည့်ရပါတယ်။ ကားပေါ်ကလည်းဆင်းပြေးလို့ မရ ၊ ဆူညံလှတဲ့ဇာတ်ကားက တီးလုံးသံ ၊ စကားပြောသံတွေနဲ့အိပ်မရတဲ့ အဆုံး စိတ်တို စိတ်ပျက်ခြင်းများစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ရပါတယ် ။
မင်းသမီးကမိုးပြည့်ပြည့်မောင် နဲ့ မင်းသားကတော့အသစ်တစ်ယောက်ပါပဲ နာမည်မမှတ်မိပါ။ သင်္ကြန်ကားလို့ သာဆိုတယ် သင်္ကြန်နဲ့ ပက်သတ်တာဆိုလို့ မင်းသမီးက မင်းသားကို နည်းမျိူးစုံနဲ့မိန်းခလေးတန်မဲ့ေ၇လိုက်လောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုသာမြင်ရပါတယ်။
ပြောမယ်ဆိုရင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင်အနေနဲ့ အဲဒီဇာတ်ရုပ်နဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းအရ ငယ်ရွယ်သူတစ်ယောက်နေရာမှာ ၀င်ေ၇ာက်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အတွက် လူငယ်ပုံပေါက်အောင် ဇွတ်ဝတ်စားပြီး ဘန်းစကားတွေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပီပြင် အောင် ဖန်တီးထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ မင်းသားကလည်း သင်္ကြန်မှာ တစ်ဦးတည်းသောညီမသေသွားခဲ့တဲ့အတွက် သင်္ကြန်ကို ဇွတ်မုန်းတယ်ပဲလုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်း။ သင်္ကြန်မှာ မင်းသားရဲ့ ညီမကို ကားနဲ့ တိုက်မိပြီးထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့ ရဲအောင် က မင်းသမီးရဲ့အကိုဖြစ်နေပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်လျောက်လုံး သင်္ကြန်ကို အမုန်းကြီးမုန်းလာတဲ့ မင်းသားပာာ ရဲအောင် ကတောင်းပန်ပြီးေ၇ာ ချက်ချင်း ခွင့် လွတ်လိုက်နိုင်တာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အိနြေ္ဒမရ နောက်ပိုးနိုင်လွန်းတဲ့ မင်းသမီးကို မင်းသားကပြန်ကြိုက်ပြီး ညားကြလေသတည်းဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ကြည့်ရှူသူပရိသတ်ကို ဘာ ရသမှမပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင့်ကားပေါ်ပါတဲ့ ကလေးတွေဆီကတော့ပေါရဲလိုက်တာ လို့ မှတ်ချက်ချသံတွေကြားရတာပါပဲ
မြန်မာသရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ များကို စဉ်းစားဖို့ အကြံပြု ချင်တာကတေှာ့ပာာသကားရိုက်ရင်တောင် ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားလုံးတွေမပါပဲ ယုတ္တိရှိရှိအဆင့်ရှိရှိ လေးရိုက်သင့်ပါကြောင်း
တခါတရံ မှာ ကိုယ်စိတ်နဲ.မကိုတ်တာ တွေတော.ရှိနေမှာပေါ့။။ ဒီလို ဇါတ်ကားမျိုးတွေ ကို အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအားပေးနေတာ ကို .၊..ရုပ်ရှင် ထုပ်လုပ်ရေးတွေကလည်း အမြတ်ရမယ် ဆိုရင် ဘာကားမဆိုရိုက် ကြမှာပါပဲ။ မြန်မာ အနုပညာ ၊ယာဉ်ကျေး မှု. တိုတက်မြင့်မားဖို. ဆိုတာထက် စားဝတ်နေရေးပြေလည် ဖို.ကအရေးကြီးတာပဲဗျာ ။
ကိုကျော်ကြီးရဲ့တကယ်လို့ များ မြန်မာဗီဒီယိုကားတွေကို ကြည့်ပြီး မြန်မာလူမျိူးကို ဒီလိုလူစားတွေပါလို့ ယေဘုယျကောက်ချက်ချသွားမယ်ဆိုရင် လူမျိူးခြားတွေအကြားမှာ ရှက်စရာကြီး
ဟုတ်ပါတယ်။ ခုတလော မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ တော်တော်ကို နိမ့်ကျလာပါပြီ။ နာရီလောက်သာ အချိန်ကုန်သွားပြီး ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာ ဘာမျှ ဘာမျှမရှိပါဘူး ။မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက အလုပ်အကိုင် မယ်မယ်ရရမရှိ တဟေးဟေး တဟားဟား နဲ့ သာ ဇာတ်သိမ်းသွားတာ များပါတယ်။ နောင် အနာဂတ် တိုင်းပြည်ကို ပုံဖော်မယ့် မျိုးဆက်သစ်လေးတွေလည်း အတုယူမှားပြီး ဒီလိုပဲ တဟေးဟေး တဟားဟား နဲ့သာနေသွားမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက် ရင်လေးလှပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရာသီဥတုကလည်းပူတော့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာအေးတယ်ဆိုပြီး မြို့လည်ခေါင်က ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နေ့ခင်းပွဲ 2ပွဲကြည့်ခဲ့တာ လုံးဝမစွံပါဘူး ။ အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ ကားတွေလေ ….. ကျိုက်ထီးရိုးမှာရိုက်တဲ့ကားနဲ့ မသာပွဲတခုကိုအကြောင်းပြုပြီးရိုက်တဲ့ ကားပါ ။ အဲ့ဒါနဲ့များတောင်လူတွေက ကြိတ်ကြိတ်တိုးလက်မှတ်ဝယ်ကြည့်ရတာ။
မြန်မာကားတွေ အဆင့်နှိမ့်မနှိမ့်တော့မသိဘူး ကျနော်ကြည့်ဖူးတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ချို့မှာ နောက်ခံ တေးဂီတကို နိုင်ငံခြားကားတွေကနေကူးထည့်ထားတာတွေတောင်တွေ့ရတယ်….မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်းမြင့်လာဖို့တော့ ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကြိုးစားလိုက်ပါဦးလို့ပဲဆိုရမှာပါပဲ..။